Muqaal: Dawn Anderson on Google BERT iyo waxa soo socda | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Fiidiyowga: Dawn Anderson ee Google BERT iyo waxa soo socda
Fiidiyowga: Dawn Anderson ee Google BERT iyo waxa soo socda
0 In ka yar hal daqiiqo
Dawn Anderson waxa ay ku qortay Google-ka BERT quusitaanka qoto dheer ee ugu dhammaystiran oo hadda waxaan awooday in aan kaamirada ku soo qaato dhawr daqiiqo si aan uga hadlo mawduuca. Dawn waxa ay waddaa wakaalad leh magaca Bertey, magacu waxa uu yimid ka hor Google BERT – go Figure.
Waxay sharraxday waxa Google BERT yahay, waxa laga yaabo inay mustaqbalka Google BERT iska beddelaan, sida SEO-yadu ay awood ugu yeelan karaan inay BERT uga faa'iidaystaan ​​ujeeddooyinkooda iyo sida Bing iyo Google u isticmaalaan si ka duwan.
Waa tan fiidiyaha:
Waxaan bilaabay taxanaha vlog-gan dhawaan, oo haddii aad rabto inaad saxiixdo si laguugu wareysto, waxaad buuxin kartaa foomkan Wareegga Raadinta. Waxa kale oo aad ku biiri kartaa kanaalkayga YouTube adigoo gujinaya halkan.
Boqorka Shabeelka ayaa isticmaalay xeelado SEO ah oo sharci darro ah si uu u marin habaabiyo baarayaasha